Newton, maneja maneja anovandudzwa aine akawanda matsva maficha | IPhone nhau
Newton, maneja maneja anovandudzwa nezvimwe zvakawanda zvitsva
Isu tinodzoka nhasi naNewton (aimbove CloudMagic), mumwe weane simba kwazvo mamaneja emaimesi pamusika uye izvo zvinotibvumidza isu kudzora manejimendi yedu. Sezvo zvisingakwanise kuva neimwe nzira, tichifunga nezve mutengo wakakwira wekunyoreswa kwayo, isu tinoona kuti Newton iri kuramba ichizvivandudza pachayo, ichiwedzera maficha nyowani nekugadzirisa matambudziko asingaite. Nguva ino, Tawana gadziriso yemangwanani kubva kuNewton uye tichazotarisa izvo zvitsva nekugadzirisa pazviri.. Handei ikoko ipapo nemabasa azvino uno, kunyanya kana iwe usingazive Chirungu, sezvo vamwe vaNewton vasinganetseke kududzira zvinyorwa zvekuvandudza muchiSpanish.
Chinhu chekutanga kutaura kuti Newton uye Instapaper vakabatanidzwa zvakanyanya, vachigadzira mubatanidzwa kubva kwavanotarisira kuwana kwakawanda kuita. Kana iri nhau dzakabatanidzwa, ikozvino isu tinokwanisa kumisikidza rondedzero yemabasa akamirira zvakananga kubva pane imwechete kubata. Zvakare isu tichakwanisa kuchengetedza otomatiki muInstapaper zvinongedzo zvinosanganisira maemail mafaira emagetsi ekuverenga gare gare.
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, Newton inosanganisira "kusada" icon yekumaka spam, sekureva kwevagadziri, chiitiko ichi chakagadziridzwa zvakanyanya. Pakupedzisira, zvakapfuma zvinyorwa muinbox zvakavandudzwa yemails.
Ivo vakasiyawo mukaha wekugadzirisa matambudziko, kunyanya zvinyowani zviziviso, dambudziko rekutakudza pane mamwe madhijitari eGmail tsamba, zvikanganiso kana uchibvisa kana kufambisa huwandu hukuru hwemafaira uye dambudziko mukutora maPDF kubva kuGoogle Drive.
Izvo zvavanoratidzika kunge vasina kugadzirisa zvakadaro ndiyo yavo inosiririsa yekutsvaga injini, Rinogona kuve basa rakaoma kuita kutsvagisa nemazwi eemaemail edu, kunyanya kana iyo yatakabatana nayo iri Outlook. Muchidimbu, hapana chakakwana.
Newton Mail - Email Anwendungvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Newton, maneja maneja anovandudzwa nezvimwe zvakawanda zvitsva
Zvikumbiro zvitatu zvekutenderera guta nekutakura kwevanhu
IBM uye United Airlines vanoshanda pamabhizimusi-chikamu chikamu cheApplication